QISO ANFACAYSA MADAXDA: Maxaa dhacay markii uu Cumar uu dabagal ku sameeyey guri uu geli jirey Abuubakar Al Sidiiq?!! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada QISO ANFACAYSA MADAXDA: Maxaa dhacay markii uu Cumar uu dabagal ku sameeyey...
(Hadalsame) 30 Maajo 2022 – Qiso xikmad badan. Cumar binu Khadaab ayaa wuxu arkay Abuu Bakar Asidiiq RC oo maalin walba salaadda Subax kaddib u soo baxaya duleedka Madiina, wuu daba galay, Abuubakar RC wuxu galay guri yar isagoo muddo saacado ah halkaas joogey, kaddibna gurigiisa ayuu dib ugu soo laabtay.
Cumar RC wax kasta oo uu samaynayo Abuu Bakar As-siddiiq wuu ogaa, marka laga reebo sirta gurigan.
Maalmo ayaa ka soo wareegey welina waxaa gurigan yar soo booqda Khaliifkii Mu’miniinta. Cumar Allah ka raalli noqdee weli ma garan waxa uu saaxiibkii ka dhex samaynayo gudaha, markaas buu Cumar go’aansaday in uu galo guriga marka uu Abuu Bakar ka soo baxay, si uu indhihiisa ugu arko waxa ku jira, una ogaado waxa uu saaxiibki ka sameeyo halkaas.
Cumar marki uu gurigi yaraa galay, waxa uu ugu tegey islaan da’ ah, indho la’ oo curyaan ah. Ibnul-Khadaab RC wuu yaabay.
Wuxu yiri: “Addoontii ilaahayey ninkan maalin walba kuu yimaado waayo?”
Waxay tiri: “Ilaahay baan ku dhaartaye garan maayo.!”
Wuxu ku yiri: “Muxuu sameeyaa? Waxay tiri: “Saxarada aan halkaa dhigana wuu iga qaadaa, ri’dana wuu iisoo lisaa, gurigana wuu ii nadiifiyaa, sidoo kale cunto ayuu ii dyaariyaa. Kaddib ayuu iska baxaa isagoon ila hadlin.”
Markii uu Abuu Bakar RC dhintay, Cumar RC wuxuu sii waday xanaaneeynta islaantii aad ayuuna ugu dadaali jirey.
Markaasay ku tiri: “Saaxiibkaa ma dhintay?! Wuxuu yiri: “Sidee ku ogaatey?” Waxay tiri: “Timir baad ii keentay, laakiin lafta kama aadan saarin.” Yacni Abuubakar RC timirta marka uu lafta ka saaro ayuu i siin jirey.
Cumar Binu Khadaab RC inta uu banaanka u soobax ayuu aad u ooyay wuxuuna yiri weedhiisii caanka ahayd: “Dadka kaa dambeeya waa daalisay Abuubakarow” yacni nin darajadaada gaari kara majiro.
Cidda la rabo inaan ku dayanno oo tusaale (role model) ka dhiganno waa raggan.
Xitaa ka sheekeyntooda waa raaxo wallaahi!
W; D: Cabdiraxmaan Abtidoon
Previous articleArrin laga yara qurxoon yahay oo looga digayo Soomaalida Turkiga
Next articleQOOL BIR AH: MW Xasan Sh oo ay hor taallo joojinta arrin uu isagu horay jideeyey (Qiso dhacday)